Mozilla waxay ku dhawaaqeysaa Telefoonnadii ugu horreeyay ee Firefox OS ee loogu talagalay Soo-saareyaasha | Laga soo bilaabo Linux
Mozilla kaliya ku dhawaaqid telefoonada ugu horeeya ee leh Firefox OS, laakiin kuwani waxaa loogu talagalay horumariyeyaasha doonaya inay tijaabiyaan codsiyada ugu horreeya ee jawiga dhabta ah Firefox OS.
Waxa ugu weyn ee ku saabsan moobiilladani waa in kaliya HTML5 aan ka heli karno dhammaan howlaha taleefanka, marka lagu daro, HTML5 oo ah heer caadi ah waxay hubineysaa in codsiyada ay yihiin kuwo iskutallaab ah oo aan ku xirnayn oo keliya soo saaraha ama madal.
Telefoonada cusub ayaa wata magacyada Keon y Fiinta, heerka dhexe ee ugu horreeya iyo kan labaad-dhamaadka sare. Iyaga ayaa horumarinaya Geeksphone iyadoo lala kaashanayo Telefónica.
Qodob kale oo lagu daray ayaa ah in Mozilla ay ixtiraamto oo ilaaliso asturnaanta isticmaaleyaasheeda. Firefox OS kaagama baahnid inaad ka walwasho shirkaddaadu inay ku basaasaan adiga ama haddii ay ku kaydinayso macluumaadkaaga shakhsiyeed server-keeda si ay uga iibiso dhinacyada saddexaad.
Waxaa la ogyahay in taleefanadan la heli doono bisha Febraayo, laakiin qiimaha weli lama oga. Waxaa habboon in la caddeeyo in kuwani aysan ahayn taleefoonnada loogu talagalay in lagu cuno dadweynaha, kuwaa ayaan weli la ogeyn goorta la heli karo Waxaa la sheegay in suuq wanaagsan uu noqon doono Brazil, maxaa yeelay ma jiro Android ama iOS midkoodna ma xakamayn suuqa casriga ah, laakiin waxaan ku celinayaa, wax yar baa laga ogyahay mustaqbalka taleefannada gacanta ee loo qaybinayo Firefox OS mar haddii nidaamku 100% diyaar yahay.%.
Qoraha maqaalka: Yacquub Hidalgo Urbino (aka Jako) oo ka socda bulshada aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Mozilla waxay ku dhawaaqeysaa telefoonnadii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Firefox OS' ee loogu talagalay soo-saareyaasha
Wuxuu aad u jeclaa inuu helo taleefan gacmeed leh Firefox OS ... muddo dheer ayaan sugayay ...
Waad ku mahadsan tahay faahfaahinta .. ..waxaan ka xumahay in aanan marin u helin humanOS ..
Haa, weli waxaan rabaa inaan gacmahayga wax ku qabsado FirefoxOS hehe.
Haa ... waa wax laga xishoodo in HumanOS.uci.cu kaliya loo heli karo IP-yada laga helo Cuba, waa xayiraadyo aan annaga iyo ragga ka soo jeedin humanOS wadaagno, laakiin ma jiro wax kale ... 🙁
Tan iyo intii aan halkaan joogay marwalba waxaan isweydiiyaa, Sidee ayaad rag u dhaqmeysaan? Ma xishoodo jahligayga. 😀
Ah si fiican, aad u fudud ... waa annaga (elav iyo aniga) waxaan ku nool nahay Cuba, sida aan halkan ugu nool nahay maxaa yeelay IP-yadayada ayaa ka soo jeeda Cuba, sidaa darteed waxaa naloo oggol yahay inaan marinno HumanOS.
In badan oo ka mid ah waxa ay daabacayaan runtii waa wax xiiso leh, taasi waa sababta aan dhowr ka mid ah tabarucaadkooda u qaadanno oo aan halkaan ugu wadaagno, sidaa darteed internetka oo dhan ayaa u akhriyi kara ...
Nooo, waxaan ula jeedaa sideen u arki karnaa iyaga?
Ah, waa hagaag, qof halkan ka yimid oo reer Cuba ah oo lahaa adeegyo leh IP-yada dhabta ah (taas oo ah, internetka hortiisa) waa inuu sameeyaa nuqul ka mid ah bogga oo uu u muujiyaa qof walba oo internetka ah, taas oo ah wax aan macquul aheyn maxaa yeelay yeelashada noocaas ah qalabka waa dhif.
Hab kale waa qof isku mid ah, adeege halkan jooga Cuba laakiin leh internet, kaas oo u oggolaanaya inay ku xirmaan server-ka iyaga oo maraya SSH ka dibna u maraya adoo adeegsanaya SOCKS5 oo marin u leh goobta, oo aad geli karto maxaa yeelay waxaad ka heli lahayd IP-ka Cuba ( IP-ga ka yimid serverka).
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa wax aad u adag in aan gaarno 🙁
Hehe, maya walaal, sidee baan u aragnaa waxaas oo dhan? inaad booqato Fromlinux? Saas ma ahee sidee isu muujisaa? Waan ka xumahay hadaanan si fiican isu sharaxin myself
AAHHH !!!! Hada haa 😀
Waxba, kaliya maadaamaLLinux uusan kujirin serverka Cuba, waa wax fudud 🙂
Waa server ay xukumaan siyaasadahayagu (kuwa DesdeLinux), maahan kuwa agaasimayaasha ama saraakiisha dowlad kasta 🙂
Ahaha, waad ku mahadsan tahay jawaabta. Guud ahaan jawaabta markasta waa tan ugu fudud. Salaan ... 😀
hahahaha si fiican haa, waxay ku dhamaatay inay noqoto LOL ugu fudud !!
Waxaa jiri doona Tor relay, ama ssh wiilasha!
«Waxay sameyn doonaan» waxaan idhi, waa maxay bahal !!! XD
Tijaabinta taageerada ElementaryOS ee goobta.
Waxba, waxay kaliya ku kordhinaysaa taageerada baaritaanka ElementaryOS ee faallooyinka iyo widget widget
Waxaan rajeynayaa, Ubuntu OS.
Runtu waxay tahay in Ubuntu mobilada loo ballan qaado waxyaabo badan oo badan oo xagga hal-abuurnimada iyo horumarka ah ... gaar ahaan haddii aan ka hadalno saldhigga ay siiso kuwa horumariya iyo xulashooyinka
Sida ay tahay, iyo haddii iswaafajintu tahay waxa ay ballanqaadayaan, waxaan hal meel ka fognahay inaan ku xirno taleefannadeenna casriga iyada oo loo marayo konsole-ku-helidda baakadaha aan dooneyno.
Waxaan rajeynayaa inaan sawirka ku dhejin karo Galaxy S, aad ayaan u walwalsanahay 😀
Waxaan ku riyoodaa maalinta aan ku rakibi karo taleefanka ubuntu ama Firefox os taleefankayga maxaa yeelay aad baan ula dagaallamayaa android
Ma garanayo sababta, laakiin Ubuntu Telefoon ama FirefoxOS midkoodna dareenkayga ma qabanayo, waxaanan isku dayayaa wax kasta oo igu soo dhaca: /
Waxaan ka walwalayaa inaan tijaabiyo!
Hubi haddii fayl ama galka jira ama aanu jirin (iyo in ka badan) oo loo yaqaan 'IF loop'
LibreOffice 4.0 waxay horumarin doontaa muuqaalka iyo shaqeynta